ABANTU ABAKHULU EMZIMBENI BANSENCUPHENI YOKUSHONA NGE-COVID | Scrolla Izindaba
ABANTU ABAKHULU EMZIMBENI BANSENCUPHENI YOKUSHONA NGE-COVID
Amazwe anamanani aphezulu abantu abakhuluphele kakhulu anezinga eliphakeme lokushona kwabantu nge-Covid 19, umbiko we-World Obesity Federation uthole lokhu.
Ukushona kwabantu abayisishiyagalolunye kwabayishumi okubangelwe yi-Covid-19 bekusemazweni anezinga eliphezulu labantu abakhuluphele ngokweqile.
Okusho ukuthi kwabayizigidi eziyi-2,5 ababulewe yigciwane, izigidi eziyi-2.2 zenzeka emazweni lapho abantu abadala abangaphezu kuka-50% abakhuluphele ngokweqile.
Lolu hlu lubandakanya iNingizimu Afrika, lapho abantu abadala abangama-53.8% bekhuluphele ngokweqile noma bekhuluphele nje, kuthi abangama-28.3% bakhuluphale ngokweqile.
Yize ukukhuluphala ngokweqile bekuvele kwaziwa ukuthi kwenyusa ubungozi kubantu uma bethola izifo ezithathelanayo ezifana nomkhuhlane, lo mbiko oyingqophamlando uthole ukuthi ukukhuluphala ngokweqile kuyisizathu sesibili esikhulu ekushoneni nge-Covid, ngemuva kweminyaka.
“Ukuhlangana kwamazinga okukhuluphala nokushona kwabantu ngenxa ye-Covid-19 kucacile futhi kuyaphoqa,” kusho uDkt uTedros Adhanom Ghebreyesus, onguMqondisi-jikelele we-World Health Organisation.
Lo mbiko uhlangatshezwe nezicelo zokuthi ohulumeni emhlabeni wonke babeke phambili ukugoma abakhuluphele ngokweqile kubantu babo, ngoba basengozini enkulu yokushona noma yokugula kakhulu.
Iphinde yagqugquzela izingcingo zokuthi ohulumeni babhekane nenkinga yokukhuluphala ngokukhulu ukuphuthuma.
Amazwe amaningi kulindeleke ukuthi aphuthe umgomo we-UN wokwehlisa isilinganiso sokukhuphuka kwamazinga okukhuluphala phakathi kowezi-2010 nowezi-2025.
Ngokwalo mbiko, amadoda aseNingizimu Afrika anethuba elingu-0% lokuhlangabezana nalesi silinganiso, kanti ithuba labesifazane lincane nje kancane, liku-1%.
UDkt uTim Lobstein, umbhali walo mbiko uthe, “Sishaqekile ukubona ukuhlangana okuphezulu kangaka phakathi kwesilinganiso sezwe sabantu abakhuluphele ngokweqile nokushona kwabo nge-Covid-19”.
Uphinde waveza nokuthi inqobo nje uma uhulumeni evuna isikhuthazo sezomnotho ngokudla okushibhile, inkinga kungenzeka ingapheli.
Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, inkinga yokukhuluphala emhlabeni wonke iye yanda kakhulu ngesikhathi salo bhubhane, abantu abaningi bedla kakhulu ngenkathi bebhajwe ngaphakathi, futhi bembalwa abazilolongayo.
Umthombo wesithombe: ScienceMag.com